Ogaden News Agency (ONA) – Soomaaliya oo Xubin Ka Noqotay Wadamada Dhaca Bad-Waynta Hindiya.
Soomaaliya oo Xubin Ka Noqotay Wadamada Dhaca Bad-Waynta Hindiya.
Posted by ONA Admin	/ October 28, 2016
War-Murtiyeed Ka Soo Baxay Wasaaradda Arrimaha Dibada ee dalka Soomaliya ayaa lagu sheegay in Wasiirka Arrimaha Dibaddu Cabdisalaam Hadliye cumar uu saxiixay Cahdiga Ururka Mideeya Waddamada dhaca Bad-weynta Hindiya ee marka la soo gaabiyo loo yaqaan (IORA).
Saxiixa Cahdigaasi ayaa dhacay intii lagu guda jiray Shirka Golaha Wasiirada Ururkaasi oo ku qabsoomay Jaziiradda Bali ee Dalka Indonesia. Heshiiskan waxa uu micnihiisu yahay in Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ay si rasmi ah xubin uga noqotay dalladda ay ku midoobeen Waddamada dhaca Bad-weynta India ee loo yaqaan (IORA). Heshiiskan ayaa dhiirigelinaya ganacsiga iyo iskaashiga dhinacyada badan oo ay ku jirto badbaadada badda, ammaanka , ganacsiga, maalgashiga, maamulka kheyraadka badda, dalxiiska iyo is dhaafsiga dhaqanka.
Mudane Hadliye oo hadal ka jeediyay kulankaasi, ayaa wuxuu diiradda ku saaray in Soomaaliya ay tahay xubin muhiim u ah Ururka (IORA), ayna xidhiidh xoogan oo wax wadaagid ah ay la leedahay inta badan Waddamada xubnaha ka ah dalladan, iyadoo aan u mareyno xubinnimadeena islmarkaana higsaneynaa inaaynu sii xoojinno , yagleelno xidhiidhka cusub oo wax wadaagid ah oo dhinac kasta ku shaqa leh oo ah dan wadaag.
Wasiirku waxa kale oo uu intaasi ku daray in Soomaaliya ka xubin ahaan waxay kala xaajoon doontaa dhammaan xubnaha (IORA) ka qeybqaadasho iyo dano wadaag horukac balaadhan ka geysan kara dhaqaalaha Soomaaliya bad iyo berriba.
Ururkan oo la aas aasay 28 October 2008 oo haatan ay ka soo wareegtay Sideed sanno waxaa xubno ka ah 21 Wadan oo ay ka mid yihiin Wadanka Hindiya, Iiraan, Yemen, Australia, Indinosia, Malaysia,kenya, Madagaskar, Cumaan, Yemen, Wadanka imaraadka carabta, koonfur Afrika iyo Wadamo kale oo dhaca badweynta Hindiya.